Ashley Vechiduku Vechiduku Nhau Yakanyanya Untold Biography Facts
musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Ashley Vechiduku Vechiduku Nhau Yakanyanya Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti Genius iyo inonyatsozivikanwa neNickname; "Muduku". Our Ashley Young Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva ino. Kuongororwa kunosanganisira Upenyu Hwake Hwepakutanga usati wasvika mukurumbira, hukama hwehukama, hupenyu hwemhuri, hupenyu hwehupenyu, hukama hwehukama uye, hupenyu hwemhuri nezvimwe zvinhu zvisingazivikanwi pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvehutano hwake hwakasiyana-siyana asi vashomanana vanofunga nezveAshley Young's biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Ashley Vechiduku Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Ashley Simon Young akaberekwa musi we 9th waJuly 1985 muStevenage, United Kingdom. Akaberekwa neCancer kuva vabereki veJamaican, Mr naMnu Luther Young.
Vechiduku vakaenda kuJohan Henry Newman School muStevenage. Apa ndipo paakatanga kutamba mutambo. Zvechokwadi, Young akatamba chikoro chesekondari pamwe chete neFormula One mutyairi weHerry Hamilton, uyo akanga ari mugore rimwe chete.
Akanga asina kumbobvira kure nebhora kubva paudiki hwake. Akazvarwa uye akakwidziridzwa muHertfordshire uye akatanga utambo hwake hwehuduku panguva ye10 kuWatford. Akava gamba rekutanga nguva dzose mu2004-05 uye aiva mumwe wevatambi vechidiki veWatford mukupikisa kwavo-kukunda 2005-06 semwaka.
Vechidiki vakaenderera mberi vachitamba zvakanaka nokuda kweWatford muPublic League, uye munaJanuary 2007 akatamira kuAston Villa. Akazvisimbisa muboka rekutanga ku Villa Park uye akakunda PFA Young Player yegore mukomborero mu2009. Pana 23 June 2011, Jaya rakasayirwa kuManchester United nokuda kwekusaziviswa kwemari. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Ashley Vechiduku Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Upenyu hwehukama hwaAshley Young hunotarisana nemukadzi umwe. Hapana mumwe munhu kunze kwehuduku hwake sweetheart, Nicky Pike. Vose vakatanga kufambidzana pavakanga vachiri kuchikoro.
Rudo Rweshiri Shiri- Ashley Young uye Nicky Pike
Ashley Young kamwechete akaedza kupemberera nguva yake yekumira kweManchester United nekupedzisira akabatanidza ruzivo nehucheche mudiki Nicky Pike. Zvisinei, zvakashata zvakaitika.
IEngland ikasimuka shamwari neshamwari dzakashamisika apo imwechete yakambomira mari yake yepamusoro 200,000 kunze kwebhuruu kwemaawa 48 isati yasvika zuva guru mu2011. Chikonzero chekudaidza chichato chake chichiri kuchengetwa chisingazivikanwi. Zvisinei, chisarudzo chake chekupedzisira chakasiya mhuri dzose dzine tsoka dzinotonhora.
Ashley akaumbwa mushure memakore mana gare gare. Akasimbisa imwe yemuchato uye achiri kuenda kunoroora Nicky Pike.
Ashley Young pakupedzisira anoroora Nicky Pike
Vose vakaroorana vane vana vaviri pamwe chete, mwanakomana ane makore mapfumbamwe Tyler nemwanasikana muduku Ellearna.
Mhuri yakanaka yaAshley Young
Ashley Vechiduku Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -Nharo
Pakupedzisira 2017, Young uye Alli vaimbove vaine maminitsi gumi nemakumi matatu ekuputira kweMichel United pamusoro pe Tottenham mushure me Young vachifunga kuti akabatwa muchiso neSpurs chaidzo-shure Serge Aurier. Alli akabatanidzwa uye akafamba-famba-ne-musoro neVechiduku vasati vatambi vemativi ose maviri vakapindira mukati mekutanga kwehafu melee.
Mitoo pakati peChino na Alli akaenderera mberi mushure mokurwisana Jon Moss akaedza kupedza mamiriro acho ezvinhu. Vateereri vakanzwisisa kuti Alli akaudza 32-year-old aifanira 'kurega nechimiro chemmer'. Vechidiki, vakakunda Premier League, FA Cup, League Cup neEuropa League neUnited States, vanotenda kuti vakapindura nekupa zano Alli kwete kutaura naye zvakasuruvara kusvikira awana chimwe chinhu.
Jaya rakagumisa kukakavara nekuudza Alli kuti: "Ndiudzei kana iwe uchikunda Prem." Iro mazwi anonzwisiswawo kuti akaenderera mberi mumugwagwa mushure mechikwata chakatungamira Young.
Vechiduku vakaseka Allimuromo mushure memutambo pamwe chete tweet yakanyorwa kuti: "Great Team Spirit. Mhinduro Yakanaka Kwazvo. Hurukuro yakaderera. "
Ashley Vechiduku Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
BABA: Baba vake ve Jamaican, Luther Young vanotsigira Tottenham Hotspur. Luther akafananidza mhuri yake yakakwirira kwazvo-pazvinhu zvose Mharidzo Yakanaka inofanira kupa.
AMAI: Ashley Young's Jamaican muSharon haasi mumwe kunze kwekutumira mabhokisi eVechidiki vaanoda kumba-kubika jerk chicken uye Jamaican inonaka inopedza. Mumashoko aVana ... "Zvokudya zvinondiyeuchidza nezvehuduku. Zvinofadza kuva nemami uye baba vangu nhaka inobva Jamaica. Apo takanga tichikura izvo zvakanga zvakanaka chaizvo zvandakanga ndichidya. Rinondiyeuchidza nezvehupenyu hwangu ".
Sharon Young nemurume wake vachiri kurarama kumaodzanyemba asi Young ari kumusoro kuchamhembe kuManchester.
BROTHERS: Ane hanzvadzi imwe yakwegura (Martin Young) anotsigira Arsenal. Gamba rake uye muenzaniso wekutarisa uye kubva kunze kwaiva Ian Wright. Zvakare, Ashley anewo mukomana wechidiki anotamba nebhola, Lewis Young, uyo akatanga kutangira Watford mu2008, uye Kyle Young, uyo muna April 2009 aidzidzira paArsenal Academy.
Hongu, VANHU vangave Vechiduku muzita, asi ruzivo rwemhuri iyi mune yebhola harina kufanana. Martin Young ane makore 6 akakura kupfuura Ashley. Ashley ane makore 4 akakura kudarika Lewis na Lewis ari makore gumi nemana anopfuura Kyle.
Lewis akavaka basa rekugara kwenguva refu neanofarira yeBurton, Northampton uye zvino Crawley. Vose Martin naKyle vese vakaona kurota kwavo kwepamusoro kwakashata nokuda kwezvikonzero zvakasiyana. Iyo quartet inoramba ichibatanidza zuva rega rega kuburikidza neNesapp chat group, naLee naAshley zvakanyanya zvakasimba nekuda kwehukama hwavo muzera uye nguva yavo yemazuva mashoma kubva kubva winger kusvika shure.
Zvechokwadi, kubva pakutamba kweEngland uye kukunda musoro weLigian Premier League, kuti uzviputire mumachechi ekumusoro, kushaya mwoyo kwekukuvadza kunetsa kukuvadza basa risati rasvika - Vechiduku vakazviona zvose.
Ashley Vechiduku Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -unhu
Ashley ane kenza uye ane zvirevo zvinotevera kuhupenyu hwake hwemodhi;
Ashley Young's Strengths: Kusimba, kunyanya kufungidzira, kuvimbika, kuva nemanzwiro, kunzwira tsitsi nekunyengetedza.
Urombo hweAshley Young: Moody, kusava nechokwadi, kusafungira, kunyengera uye kusachengeteka.
Zvakaita Ashley Young anoti: Art, pamba-shanduko yekuzvivaraidza, kusununguka pedyo kana mumvura, kubatsira vanodiwa, kudya kwakanaka neshamwari
Zvakaita Ashley Young asingadi: Vatorwa, chero kutsoropodza kwaamai, kuzarura hupenyu hwehupenyu.
Ashley Vechiduku Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -Diving Zvimhosva
Ashley Young ave achinyorwa semudzidzisi wekutamba mumutambo wekutanga. Akave oga achipomerwa mhosva yekudhakwa nepepanhau. Kunyanya zvakadaro, Vechiduku vakambozvireurura kune avo vaimbova maneja Sir Alex Ferguson uye David Moyes pamusoro pokudonha kuti uwane zvisina kunaka.
Tinokutendai nekuverenga Ashley Young Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!
Yakagadziridzwa zuva: Nyamavhuvhu 22, 2020